Nnyocha e mere: Colnakọta ma ọ bụ Nnukwu Mkpa? | Martech Zone
Monday, April 1, 2013 Bọchị Sọnde, Machị 31, 2013 Jenn Lisak Golding
Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị na-ewepụta ọdịnaya kwa izu (ma ọ bụ ọbụna kwa ụbọchị) maka ịkwado ahịa anyị, na-agba ume atụmanya anyị ịchọ ma gụọ ọdịnaya anyị. N'akụkụ nke mkpụrụ ego ahụ, anyị na-enwe olileanya na ha ga-etinye ma kwuo maka ọdịnaya anyị ka anyị wee nwee ike ịmalite mkparịta ụka (ikike). N'akụkụ nke ọzọ, anyị chọkwara ka ha mejupụta mpempe akwụkwọ ọdịda iji nweta akwụkwọ ọcha ma ọ bụ nyocha ọmụmụ, ka anyị wee nwee ike ịnakọta data karịa ndị ha bụ, ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ maka, na ụdị ọdịnaya ha nwere mmasị ịnata . Kedu ụzọ ọ bụla, anyị na-ebido isi okwu nke olile anya anyị na atụmanya nke ịzụlite mmekọrịta ahụ n'oge oge iji gbanwee ya ka ọ bụrụ ntụgharị.
Ibanye na mkparịta ụka na atụmanya dị n'ịntanetị nwere ike ịba uru dị ukwuu, ọ nwere ike ịmalite mmekọrịta "organic". Olileanya nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ itinye aka na ika gị, yana agbanyeghị na ị na-akwalite ma na-enye ọdịnaya, ọ na-eme ka ha nwee ohere iru aka nke aka ha. Zụlite atụmanya ndị a nwere ike isi ike ma were ogologo oge, mana ọ na-enye ha ohere ijikọ anyị n'ụzọ nke ha n'oge nke ha.
Ma anyị chọrọ inwe ike ijide “nro” na-eduga ka anyị wee nwee ike ịgbaso atụmanya na mmegharị mgbe ha gara na saịtị anyị ma ọ bụ itinye aka na ika anyị n'ụzọ ọzọ. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji kee mpempe akwụkwọ ọdịda na mpempe akwụkwọ ka anyị wee weghara ozi ndị ọzọ gbasara atụmanya anyị ma bido ịbịakwute ha na mkpọsa anyị. Anyị nwere echiche doro anya banyere etu ha si nwee mmasị, yana ọdịnaya ọdịnaya na-adọta ha.
Yabụ, nke a jụrụ ajụjụ a: kedụ nke ka mkpa, collectnakọta data ma ọ bụ itinye ndị ahịa aka? Kedu ihe ị chere? N'ezie, ha abụọ dị mkpa site na ahịa ahịa, mana kedu nke n'ime ọrụ ndị a na-enyere azụmahịa gị aka iru ntughari?
Họrọ otu n'ime nhọrọ na nyocha intaneti n'okpuru, nke onye na-akwado teknụzụ anyị kwadoro,Mpempe akwụkwọ . Ha na-enye obere ụlọ ọrụ nwere onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị, ibe ọdịda, yana mkpọsa ozi email, nke niile gụnyere nchịkọta na enweghị njikọta na sọftụwia ndị dị ugbu a dị ka Mailchimp, PayPal, Google docs, na ndị ọzọ.
Gwa anyị ihe ị chere na anyị ga-ede banyere nsonaazụ ya na izu 2! Enwere ike ịkekọrịta ihe ị kwuru n'okpuru.
Tags: na-anakọtaarụ ọrụụdịmpempe akwụkwọ